၁။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး မင်္ဂလာ ၃ ပါး
လူမိုက်ဆိုလျှင် ရှောင်သွေလွဲလို့၊ မမှီဝဲနဲ့ ကင်းအောင်နေ၊ ပညာရှိကို အရှည်တွဲလို့၊ မှီဝဲဆည်းကပ် နည်းယူစေ၊ သုံးပါးရတနာ မိဘများနှင့်၊ ဆရာသမားကို ပူဇော်လေ၊ ချမ်းသာကိုပေး ဆက်ဆံရေး၊ မျှော်တွေး သုံးချက်ပေ၊ အဲဒါမှ ..... ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ။
၂။ နေထိုင်ရေး မင်္ဂလာ ၃ ပါး
ကုသိုလ် ပညာ ဥစ္စာရဖို့၊ သင့်ရာဒေသ အမြဲနေ၊ ရှေးကတင်ကြို ပြုခဲ့ဖူးသည့်၊ ကောင်းမှု အထူး ရှိပါစေ၊ မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင် ထိန်းလို့၊ မတိမ်းစေနဲ့ ဆောက်တည်လေ၊ ဥစ္စာကိုပေး နေထိုင်ရေး၊ မျှော်တွေး သုံးချက်ပေ၊ အဲဒါမှ ..... ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ။
၃။ သင်ကြားရေး မင်္ဂလာ ၄ပါး
တတ်ကောင်းတတ်ရာ ဟူသမျှကို၊ ကြားမြင်သုတ ရှိပါစေ၊ အိုးအိမ်တည်ထောင် ၀မ်းစာရေးနဲ့၊ အသက်မွေးဖို့ အတတ်သင်လေ၊ လူနှင့်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များကို၊ ကောင်းစွာသင်ကြား နားလည်စေ၊ မှန်ကန်ယဉ်ကျေး ချိုသာအေး၊ ဆိုရေးတတ်ပါစေ၊ အဲဒါမှ ..... ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ။
၄။ ပြုစုရေး မင်္ဂလာ ၃ ပါး
မြင်းမိုရ်ရွှေတောင် မိဘကြွေးကို၊ ကောင်းစွာဆပ်ပေး ၀တ်ကျေကျေ၊ ကြွေးသစ်ချကာ သားနှင့်မယား၊ မြှောက်စားချီးမြှင့် ၀တ်ကုန်စေ၊ အလုပ်တာဝန် မလစ်ဟင်းနှင့်၊ အပြစ်ကင်းအောင် လုပ်ပါလေ၊ စည်းစိမ်ကိုပေး ပြုစုရေး၊ မျှော်တွေး သုံးချက်ပေ၊ အဲဒါမှ ..... ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ။
၅။ လိုက်နာကျင့်သုံးရေး မင်္ဂလာ ၄ ပါး
သုံးတန်စေတနာ ဖြူစင်လန်းလို့၊ ပေးကမ်းဝေမျှ လှုနိုင်စေ၊ ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကြံ မမိုက်မှားနဲ့၊ သုစရိုက်တရားကို ကြင့်ပါလေ၊ ဆွေမျိုးတွေကို ပြင်ပမထားနဲ့၊ သင်္ဂဟတရားနဲ့ ချီးမြှောက်လေ၊ သန့်စင်ပြစ်မျိုး လူထုကျိုး၊ သည်ပိုးဆောင်ရွက်စေ၊ အဲဒါမှ ..... ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ။
၆။ ရှောင်ကြဉ်ရေး မင်္ဂလာ ၄ ပါး
မကောင်းမှုတွေ ဟူသမျှကို၊ မတွေ့ခင်က ရှောင်ကြဉ်လေ၊ တွေ့ကြုံလာရင် မလွန်ကြူးနဲ့၊ အထူးသဖြင့် စောင့်စည်းနေ၊ အရက်သေစာ မသောက်စားနဲ့၊ မှောက်မှားတတ်တဲ့ အရာပေ၊ လုပ်ကိုင်ပြောကြား သတိထား၊ တရားမမေ့စေ၊ အဲဒါမှ ..... ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ။
၇။ စိတ်ထားရေး မင်္ဂလာ ၅ ပါး
အသက်ဂုဏ်ဝါ ကိုယ့်ထက်ကြီးက၊ ဆည်းကပ်ခစား ရိုသေလေ၊ မာနတံခွန် ဂုဏ်မကြွနဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်နှိမ်ချ အမြဲနေ၊ လောဘအပို အလိုမလိုက်နဲ့၊ ကိုယ်ထိုက်တာနဲ့ ကျေနပ်လေ၊ ကိုယ့်ပေါ်ပြုဖူး သူ့ကျေးဇူး၊ အထူးသိတတ်စေ၊ ကောင်းကျိုးဆင့်ပွား မြတ်တရား၊ နာကြားမပြတ်ပေ၊ အဲဒါမှ ..... ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ။
၈။ သည်းခံရေး မင်္ဂလာ ၄ ပါး
၀တ် စား နေထိုင် ရန်ခပ်သိမ်း၊ စိတ်ကိုချုပ်ထိန်း သည်းခံလေ၊ ကျိုးကြောင်း ပြညွှန် ဆုံးမစကားကို၊ ပြောကြားလာက နာလွယ်စေ၊ သူမြတ်ပုဂ္ဂိလ် ဟူသမျှ၊ မကြာခဏ တွေ့ဆုံလေ၊ သဘာဝတွေး မှန်ကန်ရေး၊ ဆွေးနွေး မပြတ်ပေ၊ အဲဒါမှ ..... ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ။
၉။ ခြိုးခြံရေး မင်္ဂလာ ၄ ပါး
လောကီအာရုံ ဇိမ်ယစ်မူးလို့၊ အပျော်မကြူးနဲ့ ခြိုးခြံလေ၊ မေတ္တာ ဗြဟ္မစိုရ် လက်ကိုင်သုံးလို့၊ သူမြတ်ကြင့်ထုံး ယွင်းမသွေ၊ လေးပါးသစ္စာ ဥာဏ်မြင်ကြည့်လို့၊ အမှန်သိအောင် ကျိုးစားလေ၊ ဒုက္ခလွတ်ကင်း နိဗ္ဗာန်ချဉ်း၊ အလင်းပေါက်နိုင်စေ၊ အဲဒါမှ ..... ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ။
၁၀။ စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခံ့ရေး မင်္ဂလာ ၄ ပါး
ဆင်းရဲချမ်းသာ သဘာဝ၊ တွေ့ကြုံနေကျ လူတိုင်းပေ၊ ကောင်းဆိုးနှစ်တန် အစုံတွဲလို့၊ တစ်လှဲ့စီလှည့် အမြဲနေ၊ လောကဓံကြုံ မဖြုံတမ်းပေါ့၊ မတုန်စမ်းနဲ့ စိတ်ခိုင်စေ၊ သောကကိုထိန်း ရမ္မက်သိမ်း၊ အေးငြိမ်း ချမ်းသာနေ၊ အဲဒါမှ ..... ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ။
သုံးဆယ့်ရှစ်ဖြာ မင်္ဂလာကုံးကို၊ လိုက်နာကြင့်သုံးပန်သူတွေ၊ စီးပွားချမ်းသာ ကျက်သရေတိုးလို့၊ ကောင်းကျိုးစည်ပွင့် တဝေေ၀၊ ဘေးကင်းရန်ကွာ ချစ်သူပေါလို့၊ စိတ်ရော ကိုယ်ရော ချမ်းသာမလေ၊ ပြောဆိုကြံဆ ဆောင်သမျှ၊ အောင်ရမည် ကိန်းသေ၊ အဲဒါကြောင့် ပန်ကြ ဆင်ကြ မင်္ဂလာ့ ပန်းခိုင်တွေ။
ကြာသာပတေးနေ့ ။ ။ သုံးလူ့ရှင်ပင်၊ ကျွန့်ထိပ်တင်၊ သောင်းခွင်စကြာဝဋ္ဌာ၊ နတ်ဗြဟ္မာတို့၊ ညီညာရုံးစု၊ တောင်းပန်မှုကြောင့်၊ ရတုနဂို၊ ရွှန်းရွှန်းဆိုသည်၊ ၀ါဆိုလပြည့်၊ ကြွက်မင်းနေ့ဝယ်၊ ချမ်းမြေ့ကြည်ဖြူ၊ သန္ဓေယူသည်၊ နတ်လူငြိမ်းဘို့ ကိန်းပါကို။
သောကြာနေ့ ။ ။ သန္ဓေယူကာ၊ ဆယ်လကြာသော်၊ မဟာသက္ကရာဇ်၊ ခြောက်ဆယ့်ရှစ်ကြူံ၊ ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့ဝယ်၊ ချမ်းမြေ့စုံစီ၊ လုမ္ဓိနီ၌၊ မဟီလှိုက်ဆူ၊ ဖွားတော်မူသည်၊ နတ်လူအောင်မြို့လမ်းပါကို။
တနင်္လာနေ့ ။ ။ ဖွားမြင်မြောက်သော်၊ ဆယ့်ခြောက်နှစ်ရွယ်၊ ပျိုနုနယ်၌၊ သုံးသွယ်ရွှေနန်း၊ သိမ်းမြန်းပြီးလစ်၊ ဆယ့်သုံးနှစ်လျှင်၊
ဘုန်းသစ်လျှံလူ၊ စံတော်မူ၍၊ ရွယ်မူနုဖြိုး၊ နှစ်ဆယ့်ကိုးဝယ်၊ လေးမျိုးနိမိတ်၊ နတ်ပြဟိတ်ကြောင့်၊ ရွှေစိတ်ငြင်ငြို၊ သံဝေပိုက၊ ၀ါဆိုလပြည့်၊ ကျားမင်းနေ့ဝယ်၊ ချမ်းမြေ့ရဂုံ၊ တောရပ်လှုံသည်၊ စုံမြိုင်ပင်ရိပ် ခမ်းမှာကို။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ။ ။ တောရပ်မြိုင်ပေါ်၊ ခြောက်နှစ်ပျော်၍ ခါတော်တပုံ၊ ပွင့်ချိန်ကြုံက၊ ကဆုန်လပြည့်၊ ဆင်မင်းနေ့ဝယ်၊ မြေ့ပရမေ၊ ပလ္လင်ဗွေထက်၊ ရွှေညောင်တော်ကြီး၊ ဗိတာန်ထီးနှင့်၊ မငြီးကြည်ဖြူ၊ နေတော်မူလျက်၊ ရန်မြူခပင်း၊ အမိုက်သင်းကို၊ အရှင်းပယ်ဖျောက်၊ အလင်းပေါက်က၊ ထွန်းတောက်ဘုန်းတော်၊ သောင်းလုံးကျော်သည်၊ သုံးဖော်လူတို့ ငြိမ်းပါကို။
စနေနေ့ ။ ။ ဘုရားဖြစ်ခါ၊ မိဂဒါသို့၊ စကြာရွှေဖွား၊ ဖြန့်ချီသွား၍၊ ငါးပါးဝဂ္ဂီ၊ စုံအညီနှင့်၊ မဟီတစ်သောင်း၊ တိုက်အပေါင်းမှ၊ ခညောင်းကပ်လာ၊ နတ်ဗြဟ္မာအား၊ ၀ါဆိုလပြည့်၊ စနေနေ့တွင်၊ ကြွေ့ကြွေ့လျှံတက်၊ ဓမ္မစက်ကို၊ မိန့်မြွက်ထွေပြား၊ ဟောဖော်ကြားသည်၊ တရားနတ်စည် ရွမ်းတယ်ကို။
အင်္ဂါနေ့ ။ ။ တရားနတ်စည်၊ ဆော်ရွမ်းလည်က၊ သုံးမည်ဘုံသိုက်၊ တစ်သောင်းတိုက်ဝယ်၊ ကျွတ်ထိုက်သသူ၊ နတ် လူ ဗြဟ္မာ၊ သတ္တ၀ါကို၊ ခေမာသောင်သို့၊ ဖောင်ကူးတို့ဖြင့်၊ ဆောင်ပို့ပြီးကာ၊ ၀ါလေးဆယ့်ငါး၊ သက်ကားရှစ်ဆယ်၊ စုံပြည့်ကြွယ်က၊ ရာလေးဆယ့်ရှစ်၊ သက္ကရာဇ်ဝယ်၊ နယ်မလ္လာတိုင်း၊ စံနှိုင်းမယုတ်၊ ကုဿိန္နာရုံ၊ အင်ကြင်းစုံ၌၊ ကဆုန်လပြည့်၊ အင်္ဂါနေ့ဝယ်၊ ချမ်းမြေ့နိဗ္ဗူ၊ စံတော်မူသည်၊
တနင်္ဂနွေနေ့ ။ ။ နိဗ္ဗူစံပြီ၊ ရှုမအီသား၊ သိင်္ဂီရွှေလှော်၊ အလောင်းတော်ကို၊ ထိုရော်ကဆုန်၊ လဆုတ်ကြုံ၍၊ ဂဠုန်နေ့ဝယ်၊ ခိုးငွေ့မနှော၊ ဓာတ်တေဇောလျှင်၊ ရှင်စောဉာဏ်စက်၊ ဓိဋ္ဌာန်ချက်ဖြင့်၊ လျှံတက်ကော်ရော်၊ မီးပူဇော်သည်၊ မွေတော်ရှစ်စိတ်၊ ကြွင်းတယ်ကို။
ဆုတောင်း ။ ။ ထိုခုနစ်နေ့၊ သာချမ်းမြေ့ကို၊ ဆွေ့ဆွေ့ကြည်ဖြူ၊ အာရုံယူလျက်၊ သုံးလူတို့နတ်၊ မြတ်ထက် မြတ်သား၊ ကိုယ်တော်ဖျားကို၊ သုံးပါးမှန်စွာ၊ ၀န္ဒနာနှင့်၊ သဒ္ဓါဖြိုးဖြိုး၊ ကျွန်ရှိခိုးသည်၊ ကောင်းကျိုးခပ်သိမ်း ကြွယ်စေသော်။
လှိုင်ကျော်ထွေး ၊မှတ်ပုံတင်နံပါတ်.12/ဥကတ(နိုင်) 148171 ၊ ဖုန်းနံပါတ် . 0931543530 လိပ်မူပေးပို့၍ဖြစ်စေ လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း နိုးဆော် အသိပေးအပ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓ ရက္ခိတ အဖွဲ့
တွံတေးဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တ အရှင် ဣန္ဒက - ဘ၀သံသရာ တရားတော်
Added by လှိုင်ကျော်ထွေး0Comments3Likes
၀ါးခယ်မဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တအရှင်ပညာဝံသ - ရှက်စရာ နှင့် ကြောက်စရာ တရားတော်
Added by လှိုင်ကျော်ထွေး 1 Comment 1 Like
Added by လှိုင်ကျော်ထွေး0Comments5Likes
၀ါးခယ်မဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တအရှင်ပညာဝံသ - တရားနာမှတရားပါမည် တရားတော်
Added by လှိုင်ကျော်ထွေး2Comments3Likes
*ဓမ္မဘလော့ဘ်ရေးသားသူများ (မျှဝေဓမ္မဒါနပြုသူများ) သို့ မေတ္တာရပ်ခံလွှာ*
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ(ဓမ္မ)ဆိုဒ်သည် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်မှစ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
၁။ ထေရ၀ါဒမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီး သန့်ရှင်းစွာ တည်တံ့ ထွန်းကား ပြန့်ပွားစေရန်။
၂။ ဘာသာ၊သာသနာ ချစ်မြတ်နိုးစိတ် ထက်သန်၍ ဘာသာသွေး နွေးထွေးနေစေရန်။
၃။ လူတိုင်း သစ္စာတရားဓမ္မ အသိအမြင် မှန်ကန်စေရန်။…ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
ထေရ၀ါဒ ဓမ္မစစ်များပြန့်ပွားရန်ပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းသည်အမြတ်ဆုံးသော တရားအလှူတော်ကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ် ပါသဖြင့် သစ္စာဓမ္မ ကိုမြတ်နိုးသူများ အားလုံးအား လေးစားစွာ ကြိုဆိုဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဓမ္မဘလော့ဘ်ရေးသားသူ မှ လူအား၊ဉာဏ်အားဖြင့် သဒ္ဒါတရားထက်သန်စွာ ၀ိဘဇ္ဇဉာဏ် ရင့်ကျက်စေရန် ဦးတည်ချက်ထား ကူညီခဲ့ကြသဖြင့် ဖော်ပြရန်မလုံလောက်သော ပီတိဖြင့် ၀မ်းမြောက်ကြည်ညိုစွာ သာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုပါကြောင်း ရှေးဦးပထမပြောကြားလိုပါသည်။
ဓမ္မဘလော့ဘ် မျှဝေဓမ္မဒါပြုသည့်အခါတွင်ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါအချက်များကို
များ မျှဝေခြင်း မပြုပါရန်။
၂။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ မှန်ကန်စေရေးအထူးဂရုပြုရေးသားရန်နှင့် မြန်မာစကားပြေအရေးအသားပုံစံဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်း
၃။ ထေရ၀ါဒဆိုင်ရာတရား ဓမ္မ နှင့်အညီ ရေသားရန်။
၄။ ရဟန်းပညာရှိ၊လူပညာရှိတို့၏ဓမ္မစာအုပ်များ၊ဓမ္မ၀က်ဒ်ဆိုက်ဒ်များ၊ ဓမ္မဘလော့ဘ်ဂါများမှမှီငြမ်းကိုးကား ကူးယူ မျှဝေလျှင် မူလရေးသားသူ ကို လေးစားသောအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာစာအုပ်၊တရားခွေ၊နှင့်
၅။ BlogPostအောက်ခြေရှိ Tags:နေရာ၌မိမိဦးတည်လိုသော အမျိုးအစား(ဥပမာ-ဒါနဆိုင်ရာ၊သီလဆိုင်ရာ၊သမထ ဆိုင်ရာ၊၀ိပဿနာဆိုင်ရာ၊အထွေထွေ ဗဟုသုတဆိုင်ရာ၊စသည့်ဖြင့် ဖြည့်စွက်ပေးပါရန်။
၆။ စာကြောင်း အနည်းငယ် သာ ရေးသားထားသော ၊ ဓမ္မဘလော့ဘ် ပိုစ့်တစ်ခု ဟု
သတ်မှတ်၍ မရသော စာ များ မျှဝေ ရေးသားခြင်း မပြုပါရန်။
၇။ ဓမ္မဘလော့ဘ်ရေးသား မျှဝေ သူ မှ တစ်ရက်လျှင် Blog post (၃)ပုဒ် ထက်
၈။ မိမိမျှဝေသည့်ဓမ္မဘလော့ဘ် ပိုစ့်များ အချိန်အတော်ကြာ ဖော်ပြခံရခြင်းမရှိခဲ့သော် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် Inbox ကို အရင်ဆုံးစစ်ဆေးကြည့်ပါ ။ဖျက်သိမ်းရန် အကြောင်းကြားစာ (သို့) အသိပေးစာ များကို တာဝန်ခံ Admin များမှ အကြောင်းကြား အသိပေးမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အထူးဂရုပြု ပေးပါရန်။
၉။ ရေးသားမျှဝေသောဓမ္မဘလော့ဘ်များအကြောင်းအရာတူနေလျှင်လပိုင်းမျှခြားစေကာမူပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ရက်ပိုင်းမျှသာကွာခြား၍တင်ပြလာခဲ့ပါမူနောက်မှတင်သောဓမ္မဘလော့ဘ်ကိုပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်သိရှိ သတိပြုပါရန်။
၁၀။ ဓမ္မဘလော့်စိစစ်သူ Admin များသည် စည်းကမ်းနှင့်မညီညွတ်သော ပိုစ့်များကို ကြိုတင်အသိမပေးဘဲ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် ဖြည့်စွက်ခြင်း များကို ကာယကံရှင် ဓမ္မဘလော့ရေးသားသူဘက်မှ သဘောတူညီ ခွင့်ပြုပြီးသားဖြစ်သည် ဟု မှတ်ယူထားမှု့ အား ဘလော့ရေးသားသူဘက်မှ နားလည်လက်ခံပေးပါရန်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ဓမ္မဘလော့ဘ်ရေးသား မျှဝေဓမ္မဒါနပြုသူများ သည် အထက်ပါ တင်ပြ
ချက်များကို သိရှိ ဂရုပြုပြီး ဓမ္မအလင်းရောင်များ ဆက်လက် ထွန်းညှိပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
*ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ(ဓမ္မ)၀က်ဒ်ဆိုဒ် Admin အဖွဲ့*
အက္ခရာပုဒ်ပျက် လေ့ကျက်သင်ကြ၊ ဆုံးမမယူ ၊ စာချသူရှား၊ လာဘ်များအောင်ကြံ၊ ခိုက်ရန်ကွဲပြား ဤငါးပါးသည် ဘုရားသာသနာ ကွယ်ကြောင်းတည်း။
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် ဇွန် 2, 2017 7:14amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် ဇွန် 2, 2017 7:13amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments2Likes
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် ဇွန် 2, 2017 7:11amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 31, 2017 6:21amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 31, 2017 6:19amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 31, 2017 6:16amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment0Likes
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 29, 2017 6:40amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 29, 2017 6:39amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 29, 2017 6:37amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 27, 2017 7:41amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 27, 2017 7:39amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments2Likes
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 27, 2017 7:37amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments3Likes
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 25, 2017 6:06amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 25, 2017 6:05amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment0Likes
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 25, 2017 6:03amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 23, 2017 6:58amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 23, 2017 6:57amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 23, 2017 6:56amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 21, 2017 6:22amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ဘလော့ပိုင်ရှင်thein wai သည် မေ 21, 2017 6:20amတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
၁။ ပဌာန်းပါဠိတော်၊ ဓါရဏပရိတ်တော် ( ကြာနီကန်ဆရာတော်)
Created by A BuddhismworldAdmin Jul 27, 2011 at 9:44pm. တင်ဆက်လှူဒါန်းသူ... A BuddhismworldAdmin Jul 27, 2011.
ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ, တရားတော်များ, သစ္စာ(၁၆)ချက်, အကျယ်, အပိုင်း(၁၆)
Created by A BuddhismworldAdmin Jul 11, 2011 at 9:54pm. တင်ဆက်လှူဒါန်းသူ... A BuddhismworldAdmin Jul 11, 2011.
ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ, တရားတော်များ, သစ္စာ(၁၆)ချက်, အကျယ်, အပိုင်း(၁၅)
Created by A BuddhismworldAdmin Jul 11, 2011 at 9:51pm. တင်ဆက်လှူဒါန်းသူ... A BuddhismworldAdmin Jul 11, 2011.
ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ, တရားတော်များ, သစ္စာ(၁၆)ချက်, အကျယ်, အပိုင်း(၁၄)
Created by A BuddhismworldAdmin Jul 11, 2011 at 9:46pm. တင်ဆက်လှူဒါန်းသူ... A BuddhismworldAdmin Jul 11, 2011.
ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ, တရားတော်များ, သစ္စာ(၁၆)ချက်, အကျယ်, အပိုင်း(၁၃)
Created by A BuddhismworldAdmin Jul 11, 2011 at 9:35pm. တင်ဆက်လှူဒါန်းသူ... A BuddhismworldAdmin Jul 11, 2011.
ဆွေးနွေးချက်ရေးသားသူ သုခ ထည့်သွင်းထားသည့် ဆွေးနွေးခြင်း. ပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုအား မှ ဖိုးကံထူး Sep 9. 1 Reply0Likes
မည်သည့်အခါ သာသနာတော် ကွယ်ရပါသလဲ။
ဆွေးနွေးချက်ရေးသားသူ Sai Lao Kham ထည့်သွင်းထားသည့် ဆွေးနွေးခြင်း. ပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုအား မှ ဖိုးကံထူး Aug 13, 2016. 56 Replies6Likes
ဆွေးနွေးချက်ရေးသားသူ အေးမြတ်သူ ထည့်သွင်းထားသည့် ဆွေးနွေးခြင်း. ပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုအား မှ Ni Htwe မေ 13, 2016.6Replies2Likes
Mar 24, 2016.မှာ ဘာသာရေး ကဏ္ဍတွင် aye ei thwe မှစတင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်0Replies0Likes
ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ သာသနာပြုခြင်း...အကြောင်း ဆွေးနွေးကြမယ်
ဆွေးနွေးချက်ရေးသားသူ Nyi Nyi Naing ထည့်သွင်းထားသည့် ဆွေးနွေးခြင်း. ပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုအား မှ U Aye Tun Sep 22, 2015. 16 Replies2Likes
ဆွေးနွေးချက်ရေးသားသူ ဦးကျော်ကျော်လှိုင် ထည့်သွင်းထားသည့် ဆွေးနွေးခြင်း. ပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုအား မှ လှိုင်ကျော်ထွေး Sep 1, 2015. 1 Reply 1 Like
Jul 7, 2015.မှာ ဆွေးနွေးခြင်း ကဏ္ဍတွင် thihalynn မှစတင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်0Replies0Likes
ဆွေးနွေးချက်ရေးသားသူ ဇော်ထက်မောင် ထည့်သွင်းထားသည့် ဆွေးနွေးခြင်း. ပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုအား မှ ကိုကျော်သန်း Jun 25, 2015. 38 Replies5Likes
လောကုတ္တရာ စာမေးပွဲ ကဏ္ဍ
ဆွေးနွေးချက်ရေးသားသူ နီစံ (အနီ) ထည့်သွင်းထားသည့် ဆွေးနွေးခြင်း. ပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုအား မှ ကိုဉာဏ Jun 25, 2015. 155 Replies 19 Likes
Jun 22, 2015.မှာ ဆွေးနွေးခြင်း ကဏ္ဍတွင် U Aye Tun မှစတင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်0Replies2Likes
(၂) မိမိကြောင့် တပါးသူများ အနှောက်ယှက် မဖြစ်ပါစေနှင့်။
(၃) မိမိသိလိုသော မေးခွန်းသည် အများအတွက်လဲ အကျိူးရှိစေမည့်မေးခွန်းမျိူးလားဆိုတာ မမေးမီ စဉ်းစားပါ ။
(၄)မိမိအတွက်သာမက အများအတွက်လဲအကျိူးရှိသော ဆွေးနွေးမှုမျိူးကို ဦးစားပေးပါ။
(၅)ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မေးခွန်းများကို (private chat) ကို အသုံးပြုပြီး နှစ်ကိုယ်ကြား ဆွေးနွေးမေးမြန်းပေးပါ။
မှတ်ချက်။ ။စည်ကမ်းချက်များကို ဆွေးနွေးခန်းတွင်
hla moe 24
tin aung bo
arkar92 GiveaGift
Min Tin Mon GiveaGift
Zayar Maung Maung GiveaGift
ခင်ခိုင် GiveaGift
ဆုမြတ်မွန် GiveaGift
ဗုဒ္ဓသားတော် GiveaGift
အလင်းမိုက် GiveaGift
ashinuttara GiveaGift
moe swe GiveaGift
sanhtaymai GiveaGift
swam yee GiveaGift
theinzaw GiveaGift
လွှမ်းမိုး GiveaGift
မေသုတ GiveaGift